Isaphulelo Somfundi seNetflix - Sitholakala Ngokusemthethweni Ngo-2020? - Ezokuzijabulisa
Isaphulelo sabafundi seNetflix siyadingeka esizukulwaneni samanje sabafundi abaphukile. INetflix iyisiteji sokusakaza esikhulu kunazo zonke kwi-inthanethi. Ikholeji lingakhathaza kakhulu kwesinye isikhathi. Njengomfundi, udinga okuthile ukuze uthathe ikhefu. INetflix iwukuzikhethela kwezigidi ku-intanethi. Unamathani wezici zokunikeza abasebenzisi bazo. Ngaphezulu kwe-inthanethi, ungathola ngokushesha ukuzijabulisa okuningi ngesayithi labo. Kuyikhaya leminye imidlalo oyikhonzile nama-movie online. Okubhaliselwe kwe-premium kungabiza kakhulu kubasebenzisi abasebhajethi eqinile. Abafundi bavamise ukonga imali bezama ukulinganisa izinto.
Ingabe iNetflix inesaphulelo sabafundi?
Abantu abaningi abazi uma iNetflix ihlinzeka ngesaphulelo sabafundi kwasekuqaleni. Impendulo ilula impela. Ingxenyekazi yezokuzijabulisa emnandi ayinayo inketho eyodwa yabafundi okwamanje. Izingane ezisencane zasekolishi zingathanda ukuba nethuba, kepha isiqhwaga sezokungcebeleka asikhiphanga lutho. Banomtapo omkhulu wokuqukethwe abaningi abaphule izingane zasekolishi abazowukhumbula ngenxa yokubhaliselwe okubizayo. Isaphulelo sabafundi sizokusiza ugcine imali yakho. Yonke imikhiqizo emikhulu enikezela ngezinsizakalo zokuzijabulisa itshale imali kuhlelo lomfundi. INetflix ingelinye lamasayithi ambalwa kuphela angenazo izinhlinzeko ezingeziwe zabafundi. Alukho uhlelo olwenzelwe abafundi oluzokwehlisa umthwalo wezindleko kuwe.
Ama-Akhawunti we-Netflix Mahhala 2020
Izilingo Zamahhala ze-Netflix - Izinyathelo Zokuthola
Izilingo zamahhala zeNetflix ziyindlela enhle yokusinda kwezokuzijabulisa. Isayithi linikeza abasebenzisi ithuba lokudala ama-akhawunti amasha. Kunamaqhinga amaningi atholakala online ukwenza ama-akhawunti wesivivinyo samahhala angenamkhawulo. Abasebenzisi bangenza umsebenzi wenziwe ngokubhalisa, kaninginingi, besebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene. Kuyindlela esebenzayo kepha ekugcineni kuzoyeka ukusebenza. INetflix yisayithi elithandwayo, futhi bahlala njalo benza amathuluzi amasha ukuthola ukwephulwa okunjalo. Abantu abaningi basebenzisa amakhadi wesikweletu wangempela ukuze babhalise nge-ID eyingqayizivele ye-imeyili. Lezi ngezinye zezindlela ezilula zokuthola ukuzijabulisa kwekhwalithi mahhala. Nazi izinyathelo zokuqalisa isilingo samahhala se-Netflix.
Qala isiphequluli kukhompyutha yakho bese uvakashela isayithi elisemthethweni. Abasebenzisi badinga ukubhalisela i-akhawunti entsha kusuka kule nkundla. Izokusiza ukuthi uthole iNetflix mahhala ezinsukwini ezingama-30 ezizayo. Vakashela okulandelayo isixhumanisi.
Chofoza izinketho zokuzama manje ukuqala isivivinyo sakho samahhala esizeni. Abasebenzisi bangakha i-akhawunti entsha ngeplatifomu nge-ID yabo ye-imeyili ne-password. Kuzokusa ekhasini lokubhalisa kusayithi.
Abasebenzisi badinga ukuthola uhlelo olulungele imikhuba yabo yokubuka. Kuyazuzisa ukusebenzisa okuhle kakhulu esivivinyweni samahhala. Ungahlala ushintsha uhlelo uma uqhubeka nezinsizakalo zakho.
Abasebenzisi abasha badinga ukufaka imininingwane yabo ku-akhawunti. Ukuphepha kuyinto ehamba phambili kubantu abasebenzisa izinsiza. Kufanele usebenzise iphasiwedi ephephile. Abantu abaningi bangawaqaqa ama-akhawunti we-Netflix kulezi zinsuku.
Ukuze unike amandla isaphulelo sabafundi, udinga ukufaka imininingwane yokukhokha esebenzayo. INetflix yamukela izinkokhelo ngamakhadi we-Paypal namakhadi wesikweletu. Lezi zombili izindlela ezisetshenziswayo zokubhalisela isiza.
Lapho isiqinisekiso sesifikile, ungaqala ukusebenzisa iNetflix mahhala nge-akhawunti yakho. Ngena ngemvume kunoma iyiphi ipulatifomu ukusakaza okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu. Isayithi lisekela ikhwalithi ye-HD kuye ku-UHD, kuya ngohlelo lwakho. Khansela iphrojekthi kungakapheli izinsuku ezingama-30 ukugwema ukukhokhela okubhaliselwe ngekhadi lakho. Kwezinye izifunda zomhlaba, i-Netflix inikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali esikhundleni sesivivinyo samahhala.
Ungakuthola Kanjani Izilingo Zamahhala Ezingenamkhawulo?
Ukuze uthole isivivinyo samahhala esingenamkhawulo, abasebenzisi badinga ukuba namasu ambalwa wokuphakamisa imikhono yabo. Lawa mathuluzi azokusiza ukuthi uthole imiphumela emihle kakhulu lapho uhlela ukuhlanganisa uhlelo lokubhalisa. Yenza ama-akhawunti amasha njalo ngenyanga ukujabulela i-Netflix yamahhala.
Amakhadi wesikweletu wangempela:
Amasayithi amaningi aku-inthanethi akunikeza amakhadi wesikweletu abonakalayo. Udinga ukuthola okwanele kwalokhu ukuze ubhalisele izivivinyo zamahhala. Enye yezindlela ezilula ongayenza ngayoimfihlo.com. Izinsizakalo zabo zisiza abasebenzisi ukwakha ikhadi elisha lesikweletu basebenzisa ikhadi elivele likhona. Kusemthethweni ngo-100% futhi kusebenza kuwo wonke amapulatifomu amakhulu. Ubumfihlo baziwa emhlabeni wonke ngezinsizakalo zabo zokukhokha ezivikelekile online. Dala amakhadi amasha avikelekile anemikhawulo yokusebenzisa ukuze uhlale uphephile ngenkathi uthenga ku-inthanethi.
Inethiwekhi yangasese yangasese izosiza ukufihla indawo yakho. Kubalulekile kubantu abachitha isikhathi esiningi bebheja kusayithi leNetflix. I-VPN izosiza ukuphazamisa indawo yakho ngenkathi idala i-akhawunti entsha kusayithi. INetflix isebenzisa i-geotargeting ukukhomba abantu abahlukumeza izinhlelo zesivivinyo samahhala. Kukhona ezinye izinketho ezikhokhelwayo neziningi zamahhala ze-VPN online. Sincoma ukuthi uzame ipulatifomu yeNordVPN ngezidingo zakho zokubhalisa. Kuyinsizakalo enhle yokushintsha indawo okuyo ku-inthanethi.
Vakashela - https://nordvpn.com/ .
Yiziphi ezinye izindlela ezihamba phambili zeNetflix?
Kunezindlela ezimbalwa ongazisebenzisa kuNetflix ezingaba wusizo ekusebenziseni kwakho i-inthanethi. Imikhiqizo edumile efana ne-Amazon, iHulu, nabanye batshalile imali esaphulelo sabafundi. Sizobheka futhi sikusize ngokuzijabulisa kwakho. Ezinye izindlela zinhle kepha hhayi kakhulu njengeNetflix. Abantu abaningi bathanda ipulatifomu ngenxa yokunikeza okulula. Abanye abaku-intanethi abavamile ukusondela ngokwelabhulali yabo yokuzijabulisa nokutholakala kalula. Njengomfundi, awunakho okunye ongakwenza ngaphandle kokubheka izinsizakalo ezingabizi.
UHulu ubambisene neSpotify nesikhathi sokubonisa ukunikeza abafundi insiza yokusakaza engabizi. Ungaqala ukubuka imibukiso yakho oyithandayo noHulu nge $ 4.99. Kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa insiza yabo. Sekukonke, iHulu iyipulatifomu enhle kakhulu yabasebenzisi abathanda ukuhlanganiswa kwesikole esidala nokuzijabulisa okusha. Kunemibukiso eminingi ethandwayo efana neBrooklyn Nine-Nine, Bob's Burgers, phakathi kwabanye. Qala ukusakaza imibukiso yakho oyithandayo kuwo wonke amadivayisi wakho kalula.
Vakashela - https://www.hulu.com/ .
2. I-Amazon Prime Video
I-Prime Video iyisevisi ekhethekile ye-Amazon. Banikeza konke okubandakanya isaphulelo sabafundi ezinganeni eziya ekolishi. Izokusiza ukuthi ujabulele zonke izinsizakalo zokusakazwa kwe-premium mahhala. Jabulela ukuthola imibukiso yakamuva nama-movie kumadivayisi akho. Ividiyo ephambili ye-Amazon inezinhlinzeko eziningi zokudla ezilalelini ezahlukene. Kuyindlela enhle kakhulu yeNetflix yabantu abasebhajethi. Uhlelo lwabo oludume kakhulu ngelikaTom Clancy, uJack Ryan. Njengamanje, banikeza abafundi isivivinyo sezinyanga eziyisithupha ngezinsizakalo zabo ze-premium.
Vakashela - https://www.primevideo.com/ .
Izaphulelo zabafundi zeNetflix azikho kubantu emhlabeni jikelele. Ungasakaza okuqukethwe kwakho okuthandayo kunoma iyiphi idivayisi oyithandayo. Siyethemba ukuthi lokhu kuzokusiza ngemininingwane edingekayo maqondana nesaphulelo.
I-Fall Guys ithola ibhodi ye-Monopoly lapho ungalahla khona abantu ngokoqobo!
I-Destiny 2: Ukukhanya Kulindelwe Ukuqhubekela Ngokuzayo: Ngingakwazi Ukuyidlala Ku-PC Yami?